Uummata Sudaan Lolaa Bishaaniin Miidhameef Addunyaan Yoo Hin Birmanne Sabatinsa Siyaasaa Biyyattii Balaarra Buusa, Jedhame
Onkoloolessa 16, 2020
Balaan lolaa bishaanii hamaan Sudaan mudate, lammiwwan biyyattii gara 90,000 miidhee jira. Namoota 120 ajjeesuu isaa fi maatiilee kuma heddutti lakkaawaman mana-malee hambisuu isaa, akkasumas qonnaa fi jiruu isaanii mancaasuu isaa tu gabaasame.
Ka guyyoota afuriif haala Sudaan keessaa daawwatanii deebi’an - Daarektarri muummichi Waldaalee Fannoo Diimaa fi Baatii Diimaa – Joon Chaapaageeyin, balaan lolaa bishaanii Sudaan mudate ka waggoota kurna sadii keessatti isa baay’ee hamaa tahe, hanga isaan eegan irraa fagoo tahuu dubbatu.
Naannoo Algaamaayer jedhamu kan handaara magaalaa Kartuum jirun daawwadhe. Manneen, ijaarsawwan fi midhaan lafa irraa marti manca’aniiru. Gabaabaadhumatti haalli isaa baay’ee gaddisiisaa dha. Lafti isaa baay’ee how’aa dha. Digirii Seentiigiredii afurtamaa oli. Gaaddisni homtuu hin jiru. Mooraan nuti daawwanne, kuufama bishaaniin marfamee jira. Bookeen naannoo sanaa gar-malee baay’ee dha, jedhan – Chaappaa-geeyin.
Akka jecha isaaniitti kan namoonni bishaan qulqulluu fi mana qulqullaa’inaa argatan mana barnootaa itti dhihoo jiru irraa ti. Inni immoo halkan ni cufama. Kana malees jalqaba waggaa kanaa irra biyyattiin hoomaa hawaannisaan weeraramtee akka turte ka dubbatan – daarektarichi Waldaalee Fannoo Diimaa fi Baatii Diimaa Addunyaa, dhiibbaan COVID itti fides baay’ee hamaa dha, jedhu. Gargaarsi uummatni mootummaa biyyattii irraa eegu baay’ee baay’ee guddaa tahuu isaa fi kun baatiilee dhufan keessa ka dabalaa deemuu tahuullee tilmaaman. Gama biraan ka bara dabre taayitaa qabate – mootummaan biyyattii biyya hiyyeettii sana keessatti sirna siyaasaa sabatiinsa qabu fiduu fi hookkara siyaasaatti xumura gochuuf carraaqaa jira.
Matakkal Tasgabbiitti Deebi’aa Jira, Mootummaan Naannoo Benishaangul Gumuz
Dhukkubii Koviid-19 Hiyyummaa fi Beela Hammeessee Jira
Prezidaan Traamp Fi Mormituu Isaanii Baaydin Walfalmii Itti Fufanii Jiru
Weerara Hawwaannisaa Ittisuu Keessatti Qindomiinaan hojjachuu fi Odeeffannoo Wal Jijjiruun Barbaachiisa: Angawaa
Hariiroon Nagaa Itiyoophiyaa fi Ertraa Gidduu Beekkamtii Argachuu Qaba:Dinaa Muftii
Ibsa Seneeter Kiris Kuuns Eega Itiyoophiyaatti Imalanii Deebi'anii Booda Kennan
Hawaasni Oromoo Waashingitan Diisii fi Naannoo Hiriira Mormii Geggeessan
Abbaan Warraa Mootitti Briteen Du’an Boqotan
Mirga Namoomaa Fi Filannoo
Bulchiinsi Naannoo Afaar fi Kan Somaalee Walii Galtee Tolfatan